musha nyika dzakabatana Comedians Ellen DeGeneres Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
ChildhoodBiography inopa Nyaya Yakazara yeAmerican TV Host ine zita remadunhurirwa “ED".
Yedu vhezheni yeEllen DeGeneres 'Biography Chokwadi, kusanganisira yake Yehudiki Nyaya, inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva pamakore ake ekutanga kusvika zvino.
Ongororo iyi inosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nyaya yehupenyu mukurumbira, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hupenyu hwehukama, hupenyu hwemunhu, chokwadi chemhuri, mararamiro, uye zvimwe zvidiki zvisingazivikanwe chokwadi nezvake.
Ehe, munhu wese anoziva nezve yake quirky yekutarisa kuseka. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Ellen DeGeneres' biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Ellen DeGeneres Yehucheche Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Mapenzi Ellen Lee DeGeneres akazvarwa pazuva re26th raNdira 1958 kuguta reMetairie muLouisiana USA.
Ndiye wechipiri pavana vaviri vakazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake, Betty DeGeneres nababa, Elliott Everett DeGeneres. Tarisai, vabereki vaEllen DeGeneres.
Iye ane mukurumbira muterevhizheni wepaTV anopeta kaviri semunyarikani inyika yeAmerica yemarudzi akavhengana neCajun/French, Chirungu, Irish, German, kure Dutch, uye Swiss-German midzi.
Uye zvakare, Ellen ane hupenyu hwake hwepakutanga hwakadzika midzi muguta rake rekuzvarwa muMetairie, kwaakarerwa pamwe nemukoma wake mukuru, Vance DeGeneres.
Kukura muMetairie, Young DeGeneres aive mwana anocherekedza uye aibuda aipedza nguva iri nani yenguva yake yemahara kuchovha bhasikoro kutenderera guta kuti aongorore runako rwayo nekukoshesa rakasarudzika.
Kunyangwe mweya wakasununguka uye wekutsvagisa waDeGeneres wanga wakapesana zvakanyanya nekurerwa kwake kwakachengetedza, vabereki vake munguva pfupi vakaita runyararo nenyaya yekuti aive shiri yaive yakanyanya kunaka kuti isadzingwe.
Ellen DeGeneres Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Pakazosvika nguva DeGeneres akange ave zera gumi nemashanu vabereki vake vakarambana, chiitiko chakaita kuti amai vake - Betty vanetseke mupfungwa.
Paive panguva iyi DeGeneres paakaona kugona kwake kwekuzvarwa sezvaaishandisa hunyanzvi hwekuita kuti amai vake vaseke uye kubata nechikamu chakaomarara.
Mushure meizvozvo, kuseka kwakave kwakakosha chiratidzo chekudyidzana kwaDeGeneres.
Akakudziridza tarenda kuburikidza nemazuva ekupedzisira edzidzo yake paGrace King High School kuMetairie kusvika pakupera kuAtlanta High School asati aenda kuYunivhesiti yeNew Orleans, kwaakakunda muzvidzidzo zvekutaurirana.
Ellen DeGeneres Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
DeGeneres aingopedza semester kuYunivhesiti yeNew Orleans asati abuda kuti ave neruzivo rwebasa sahweta, bartender, muenzi uye mupendi wemba.
Panguva iyo DeGeneres yaive pariri, akaona kuti hapana rimwe reMabasa raikodzera hunhu hwake hunoseka.
Saka zvakatanga kumurwira mumitambo yekumira-kumusoro, enceeing uye terevhizheni kuratidzwa zvakateedzana.
Kwaive kuratidzwa kweterevhizheni kuma1980 ekupedzisira - kunyanya chikamu mu'The Tonight Show Starring Johnny Carson '- icho chakapa DeGeneres hwaro hwakasimba hwaaida mukufambira mberi kwebasa.
Hazvina kutora nguva refu DeGeneres isati yaonekwa mumatcom anosanganisira 'Open House' uye 'Laurie Hill' izvo zvakamupa iye show nyowani 'Idzi Shamwari Dzangu'.
Ellen DeGeneres Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Varongi ve 'Idzi Shamwari Dzangu' vakafadzwa kwazvo nemabatiro akaitwa naDeGeneres showa yekuti vaive nemwaka wechipiri wechiratidziro chakatumidzwa zita rake sa'Ellen '.
Zvese zvaive zvakanaka na'Ellen 'iyo yakatanga kuridza pa' ABC Network 'muna 1994 kudzamara DeGeneres hunhu pane sitcom hwabuda mukamuri seyegay kumurapi wake, yakatambwa na Oprah Winfrey muchikamu, chakanzi "Iyo Puppy Chikamu".
Kutevera zaruriro, DeGeneres nevakuru veABC vakatarisana nedutu rekushoropodzwa paakaenderera mberi nekupa madingindira evanhurume kuzvikamu zvakati zve'Ellen '.
Kwakanyanya kushoropodzwa zvekuti vakakurira vateereri vaitsigira izvo 'Ellen', budiriro iyo yakazopedzisira yakonzera kudzimwa kweshoo muna 1998.
Ellen DeGeneres Biography - Simuka Mukurumbira Nhau:
Kuenderera mberi, DeGeneres akaonekwazve paTV mu2001 aine sitcom nyowani inonzi 'The Ellen Show'. Iyo sitcom yaive yenguva pfupi sezvo yaingoburitsa zvikamu 18 zvisati zvambomiswa.
Nekudzimiswa, Degenrers akaonekana nemasaiti uye akamutarisa pamasikati ehurukuro dzepa terevhizheni Saka, 'The Ellen DeGeneres Show' yakatangwa munaGunyana 2003.
Iyo yemasikati hurukuro yeterevhizheni show haina kungo gamuchira kwakapararira kwakakomba kurumbidzwa mukati memwaka wayo wekutanga asi zvakare yakasarudzwa kumisangano yegumi nemasere Emmy Awards iyo yakahwina ina.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora 'Iyo Ellen Degeneres' show ndeimwe yeanonyanyo kuzivikanwa masikati terevhizheni hurukuro inoratidza iyo inomira kunze kweDeGeneres 'quirky, isina ruzivo asi nyaya dzinosekesa dzakadonhedzwa nemaoko ake akasununguka-makumbo.
Chii chimwe? anoimba nekutamba nevateereri uye dzimwe nguva anovapa mibairo yemahara uye nzendo nerubatsiro rwevatsigiri vake. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Ellen DeGeneres Hukama Hupenyu:
Beyond Ellen DeGeneres hupenyu hwehupenyu hupenyu hwake hwakapfuma hwerudo hune makore anopfuura makumi mana akawana kuratidzwa mukufambidzana kwake uye kuroora.
DeGeneres asati akwira kuva nemukurumbira, aive nevasikana vakawanda vaisanganisira mushakabvu Kat Perkoff uye mugadziri weAmerica Teresa Boyd.
Paakazarura hukama hwake muna 1997 Ellen akadanana nemusikana wake wekutanga wevanhu vese Anne Heche kweanenge makore matatu asati adanana nemutori wemifananidzo wemuAmerican uye mutambi Alexandra Hedison kweanenge makore matatu.
2004 raive gore iro Ellen akasangana nerakanaka Portia De Rossi uyo akagumisa kufambidzana kwake.
Shiri dzerudo dzakakurumidza kuirova kubva kumusangano wavo wekutanga uye vakasungira banga makore mana gare gare kumba kwavo kweBeverly Hills.
Muchato uyu wakapindwa neboka diki rehukama hwakasimba uye hunogara hunofara kuti muchato wevaviri ava wakasimba pamakore gumi.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti DeGeneres nemukadzi wake Portia havana vanakomana (s) nemwanasikana (s) panguva yekunyora nekuti havadi kuzvipira kunouya nekurera vana.
Ellen DeGeneres Hupenyu hwemhuri:
Taura zveDeGeneres hupenyu hwemhuri, iye anorumbidza kubva kumhuri yepakati-yemhuri. Tinokuunzira chokwadi pamusoro peTerevhizheni anochengeta mhuri kutanga nevabereki vake.
Nezve Ellen Degeneres baba:
Elliott Everest DeGeneres ndibaba vaEllen. Iye akazvarwa pa28th yaJune 1925 uye akashanda semumiriri weinishuwarenzi kwenguva yakakosha. Ivo baba veasingasviki vaviri vana havana kumbobvira vaine mushonga muhupenyu hwavo hwese nekuti vaive muChristian Scientist ainamatira zvakanangana nezvitendero zvechitendero. Kusvika parufu rwake muna Ndira 2018, Elliot aive nehukama hwakanaka nevana vake kunyanya Ellen uyo akawana mukana wekumukwazisa.
About Ellen Degeneres amai:
Betty DeGeneres ndiamai vaEllen. Iye akazvarwa pa30th yaMay 1930 uye akashanda semurapi wekutaura uye mutambi. Aive Betty uyo akarera Ellen mushure mekuparadzana nemurume wake muma1970. Chii chimwe? Betty aive panguva iyoyo-achangotanga comedian vateereri paakatanga kuongorora nzvimbo dzake dzekunakidzwa. Amai vakafanana vakaenderera mberi nekumira pachena naEllen panguva yekuyedza kwakamutevera achibuda muwadhiropu. Akatonyora bhuku rakanzi 'Rudo Ellen' kuti ataure kunzwisisa kwake uye rudo kuna Ellen.
About Ellen Degeneres siblings:
Ellen haana hanzvadzi asi mukoma mukuru anonzi Vance. Iye mukoma munin'ina akakurira naEllen asati asarudza kunamatira nababa vake Elliot zvichitevera kupatsana kwevabereki vavo.
Anozivikanwa kuve "Jack wezvese zvigadzirwa" Vance akashanda muMarine Corps sekambani uye akaongorora radio neindasitiri yemimhanzi.
Akaroora mukadzi wake Joanna DeGeneres uye anomhanyisa Warner Bros 'Carousel Productions panguva yekunyora.
About Ellen Degeneres hama:
Achifambira mberi kubva kuDeGeneres yepedyo hupenyu hwemhuri vanasekuru nasekuru vake vaive Elliott Everett DeGeneres naRuth Elodie Martin apo sekuru vake naambuya vake ndiWilliam Dick Pfeffer naMildred Morrill zvakateerana.
Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa ndezve babamunini vaEllen nababamunini vake apo babamunini vake, babamunini pamwe nababamunini vasina kuzivikanwa panguva yekunyora.
Ellen DeGeneres Hupenyu Hwako:
Hunhu hunhu hunotsanangudza Ellen DeGeneres ndeyeAkizarius zodiac chiratidzo. Zvinosanganisira iye kuita kuseka kuseenzesa, kunzwa, quirky uye philanthropic, kutendeseka uye pachena kuzarura pachena zvinhu nezve hupenyu hwake hwega uye hwepachivande.
Iye munyori uye mugadziri anoita zviitiko zvinoverengeka zvinopfuura zvido zvake uye zvido zvake.
Zvinosanganisira kutamba nekutamba nemitambo yetenisi, kuimba, kutamba, kuunganidza magirazi ekare, kutarisa mhuka yemhuka kuratidza uye kushandisa nguva yakanaka neshamwari uye nemhuri.
Ellen DeGeneres Mararamiro:
Iwe unoziva here kuti Ellen DeGeneres ine mari inofungidzirwa kuti inodarika emadhora mazana mana emadhora panguva yekunyora?
Matunhu eDeGeneres 'akakosha ane masosi avo akagadzwa mune yake komedhi, kubata terevhizheni, kuita, kunyora, uye kugadzira zvigadzirwa apo ongororo yemashandisiro ake maitiro zvinoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Kunongedzera zvinongedzo kumararamiro akadaro kunosanganisira DeGeneres 'penchant yekupururudza imba sezvaakaita mumakore gumi nemashanu apfuura akaita mamirioni kubva mukutenga nekutengesa zvese kubva kumusoro-soro "imba yemiti" kune yechinyakare razi rezvipfuyo.
Muchokwadi, aida imwe pfuma zvakanyanya zvekuti akazopedzisira atenga mwedzi mishoma mushure mekunge atengesa.
Beyond DeGeneres 'isina kudzivirirwa kuravira kweReal estate, aratidza kugutsikana nekuve nenhamba shoma yevatyairi vanodhura mumotokari yake muunganidzwa.
Ivo vanosanganisira Porsche Turbo S, Ferrari California pamwe nePorsche 911 Carrera S.
Ellen DeGeneres Untold Chokwadi:
Iwe Unoziva sei Ellen DeGeneres kupfuura zvatakanyora nezvenyaya yake yehudiki uye bio? Ramba uchitenderera apo tinopa zvishoma zvisingazivikanwe kana zvisinga taurike chokwadi pamusoro pake.
American Funnywoman haaputi, kana kupihwa kunwa panguva yekunyora. Muchokwadi, DeGeneres akarega kuputa muna 2005 nekuti ainyara netsika iyi.
Makumi emakore gare gare akarega kunwa kuitira kudzivirira mukadzi wake Portia kuti asadzokere mukushandisa zvinodhaka.
Ellen DeGeneres vabereki vakamurera mumusha weChristian Science. Anotenda muna Mwari uye anopupura kuti Ari kwese kwese. Mukuwedzera, anoona Mwari muzvisikwa semiti uye anofunga nezvezviitiko zvehupenyu hwakanaka saMwari.
Zvemuviri zvehunyanzvi ingangove yekupedzisira ajenda pane yeDeGeneres 'runyorwa rwezvinodiwa sezvo kutaridzika kwake kwakanaka uye avhareji kureba kukuru kunoita kuti afunge zvishoma zvematatoo. Zvisinei, vateveri vanoratidzira rudo rwavo kumubati weTerevhizheni nekuve nehunyanzvi hwemuviri kwaari.
Ellen akazviratidza kuva mumwe wevane tarenda uye anokwanisa kuita zvevhivhizheni nekuve nepfuma yakawandisa mumafirimu anoonekwa anozivikanwa pakati pavo ndi'Farai Lover '(1998) uye' Iyo Rudo Tsamba '(1999). Iye akakweretawo izwi rake kune hunhu hwaDory mu 'Kutsvaga Nemo' (1999).
Kodzero dzemhuka dzinofamba:
Havasi vazhinji vanoziva kuti DeGeneres ndeye Vegan. Kwete kungova vegan iye mudiki wemhuka anoda kutaura zvakasununguka mukutsigira mutemo wekuchengetedza mhuka.
Chii chimwe? Muna 2010 akashanda semumiriri wemushandirapamwe uyo wakabvunza vanhu kuti vatore turkeys pane kuzvidya pakutenda!
Thanks for reading vedu Ellen DeGeneres Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!